Quaternary fauna: njirimara na mgbanwe nke mmadu | Netwọk Mgbasa Ozi
El oge quaternary bụ nke ikpeazụ kwekọrọ na Oge Cenozoic. Ọ bụ oge na-aga n'ihu taa nke bidoro ihe dị ka nde afọ 2.5 gara aga na nke gụnyere mmepe mmadụ. A mụrụ Quaternary fauna n'ụzọ zuru ezu ebe ọ bụ na ọ dị mfe ịnweta ozi ịbụ nke a na nso nso a.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara anụmanụ nke Quaternary.
1 Oge quatary
2 Mmadu na umu anumanu nke Quaternary
3 Ifuru na mmepe
4 Quaternary anụmanụ
Ọ bụ oge nwere ọrụ na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ na-arụ ọrụ dị ka n'oge ndị gara aga, ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ ga-ebelata nke ukwuu. Mmeghari nke kọntinent ahụ nwere nwayọ nwayọ na nwayọ, dị ka usoro ndị ọzọ. Usoro orogenic na-ebute site na nkata nke tectonic plate. Otú ọ dị, site na ihe a pụrụ ịhụ n'ọmụmụ dị iche iche, na mpaghara nile nke quaternary enwere obere ọrụ nke orogenic a.
Otutu umu osisi na anumanu nke anakpo Quaternary nke megoro nke uku. A hụwokwa mmụba dị ukwuu na mkpochapụ nke ụdị. N'ihi mgbanwe ihu igwe na ọdịdị mmadụ, ọtụtụ puku ụdị anọrọla ma anyị na-eru nso mbibi nke isii n'ụwa niile.
Na nchịkọta, enwere ike ịsị na ọ bụ oge dị jụụ site na nyocha ala. Mbelata nke okpomọkụ gburugburu ebe obibi ebutela ụzọ, na-akpata ọtụtụ glaciations. Otú ọ dị, anyị bi ugbu a na oge agbụrụ nke anyị maara dị ka Holocene.
Mmadu na umu anumanu nke Quaternary
Mmepe nke mmadu bu ihe puru iche karie na uzo nke Quaternary. Ọ bụ ebe a ka ndị nna nna mbụ nke mmadụ nke oge a pụtara. Akụkụ mbụ nke mmalite mmadụ bụ Australopithecus na evolushọn ugbu a bụ Homo sapiens. Ọ bụghị naanị na nka mmadụ ka a mụbara, mana ọ dịkwa mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Achọpụtala Quaternary maka inwe ọtụtụ ụdị mkpochapụ. Mkpochapu a na-eme n'usoro usoro mgbe ọdịdị mmadụ pụtara. Ihe a na-akpọ megafauna nke dị na ngwụcha Pleistocene na-apụ n'anya n'ike n'ike. Ndị ọkachamara na-atụle na ọrụ mmadụ bụ isi ihe kpatara mkpochapụ. Nke a bụ n'ihi na mmadụ na-eji anụmanụ enweta uru dị ka nri, akwa, ịkpụ ihe, na ndị ọzọ.
E nwere ọtụtụ ndị ọkà mmụta sayensị egwu tụrụ n'ihi na ha amụwo ọsọ ọsọ nke mkpochapụ a na-ewere ọnọdụ na ọ bụ nke kachasị ukwuu na akụkọ ntolite niile. Na onu ogugu umu anumanu na-anwuchapu, ha enweghi oge iji imeghari onodu ohuru. Tụkwasị na nke a, ndepụta a nke ụdị ihe ize ndụ na-agbasawanyewanye.
Ifuru na mmepe
Ogwu ahu nwetara otutu ihe di iche ma n'ogo ala na ala. Ihe ndi ozo di iche-iche dabere na onodu ubochi nke oma ma, site na nke a, umu anumanu emepeputala ihe omuma ndi nwere ike ime ka ha di iche iche.
Ihe ndekọ nke fosil na-egosi na e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke osisi thermophilic ndị nweworo ike imeghari na ọnọdụ okpomọkụ dị oke. Offọdụ n'ime ha bụ ndị na-emegharị ka ọnọdụ oyi dị oke oyi. Oge quaternary kpatara ọdịdị nke ụdị mkpụrụ ndụ dị iche iche nwere njirimara ihu igwe nke ha. Nke a na-ekpebi ụdị osisi ga-eto na ha.
Ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke osisi ndị dị na mbara ala bụ angiosperms. Ha bụ ndị nwere mkpụrụ echekwara. Emechara na Quaternary, oke ohia na oke ohia malitere iputa, karie na onodu ebe ohia. Oge ọ bụla osisi ahụ agbanweela ọkachamara dị ukwuu na gburugburu ebe dị iche iche.
Anụmanụ ahụ agbanweghị nke ukwuu site na mbido Quaternary ruo ugbu a. Animalsmụ anụmanụ ndị gbara gburugburu kemgbe mmalite oge ahụ jisiri ike dịrị ndụ iche iche gburugburu ebe obibi. Ihe ka ọtụtụ n'ime ha adịgide ruo taa. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ akụkụ dị mkpa ịkpọtụrụ.
Anụmanụ bụ anụmanụ ndị nwere mmalite na mmepe kachasị ukwuu. Ebe ọ bụ na otu nnukwu anụmanụ na-enye ara, ha kpọrọ ya megafauna. N'etiti megafauna enwere ụmụ anụmanụ ndị ama ama ama ama na mammoth, megatherium na saber ezé. Njirimara kachasị nke anụmanụ ndị a bụ nnukwu nha ha nakwa na ajị anụ siri ike kpuchie ha. Ndị a bụ ụdị mmegharị iji nwee ike ịlanarị oyi.
Otutu umu anumanu nke megafauna anwuola ugbua. Nnukwu mmiri ahụ na enyí na agụba saber na-aga n'ihu taa. Megatherium bụ sloths dị ugbu a.
Quaternary fauna bu onye nwuru anwu kachasi. N'oge Holocene, mkpochapu ụmụ anụmanụ n'ihi mmepe mmadụ abawanyewo. Mụ mmadụ na-ahụ maka mkpochapụ nke ọtụtụ anụmanụ. N'etiti anụmanụ anụmanụ na-egbu egbu, anyị nwere ike ịkpọ mammoths, dodos na nkịta ọhịa Tasmanian, n'etiti ndị ọzọ.
Ndị Amphibi kachasị eyi egwu dịka a na-eme atụmatụ na 30% nke ụdị niile nwere ike ịpụ n'anya n'ime afọ ole na ole sochirinụ. Mmepe nke mmadu bu ihe na-ekpebi umu anumanu quaternary. Ọ bụ ebe mbụ hominids malitere ruo ugbu al Homo sapiens. N'azụ Australopithecus ihe Homo habilis na mgbe e mesịrị Homo erectus. Speciesdị a enweelarị njirimara bụ isi nke inwe ike ịga ije n'ụzọ ụkwụ abụọ. Nke a nyere ya ohere ịmatakwu ala niile gbara ya gburugburu.
O nwekwara ike ịchọpụta egwuregwu ahụ na nnwale mbugharị na mpaghara ndị ọzọ. Na homo neanderthalensis ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị iche. Nke a bụ n'ihi na a na-emegharị ahụ ya na okpomọkụ dị ala. Enyere ya aka site n’enyemaka nke aji nke anumanu achu achu ma mee uwe ha ichebe onwe ha site na ntu oyi. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ochie nile nke ụdị a achọtala na kọntinent Europe.
Ugbua Ndị ọzọ Ọ bụ nke na-ehiwe ọha mmadụ ma gosipụta usoro ọchịchị ga-elekọta mmadụ. Isbụrụ gị etolite etolite ma nwee ike nyochaa okwu na akụkụ dị iche iche ma nagide ọnọdụ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya. O nwekwara ike ịzụlite asụsụ ịsụ asụsụ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere anụmanụ nke Quaternary.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Quaternary anụmanụ